Zarif: Aad ayaan ugu dhawnahay gaarida heshiis - BBC Somali
Zarif: Aad ayaan ugu dhawnahay gaarida heshiis
4 Luulyo 2015
Image caption Wadahadalka ku aaddan barnaamijka nuclear-ka Iran.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Iran, Mohamed Javad Zarif, ayaa muuqaal uu soo dhigay barta Youtube ku sheegay in heshiis laga gaaro barnaamijka nuclear-ka dalkiisa uu u muuqdo mid aad u dhow.
Mr Zarif ayaa video-ga baahiyay xilli dhinacyada wadaxaajoonaya ay ku dadaalayaan, sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrimaha muhiimka ah, ka hor inta aan heshiiska laga gaarin barnaamijka nuclear-ka Iran.
Wasiirka ayaa muujinayay arrimaha asaasiga ah ee ay Iran dooneyso, isaga oo sheegay in cunaqabateynta ay tahay mid aan cadaalad ku saleysneyn.
Balse waxa uu sheegay in Iran ay diyaar u tahay in ay saxiixdo heshiis wanaagsan oo isu dheeli tiran.
Mr Zarif ayaa sheegay in heshiiska noocaasi ah uu albaab cusub u furayo, in Iran iyo dalalka dunida ugu taagta roon, ay iska kaashadaan arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka xagjirnimada ka taagan gobolka Bariga Dhexe.
Mas'uul Mareykan ah ayaa sheegay in ururada sida kan isku magacaabay dowladda Islaamka ay khatar cad ku yihiin Iran iyo Mareykanka, balse ujeedka wadaxaajoodka Vienna uu hadda yahay sidii looga hortagi lahaa khatar ka dhalata hub nuclear ah oo ay Iran yeelato.
Is-afgarad ka gaarida barnaamijka nuclear-ka Iran iyo weliba in heshiis buuxa ay dhinacyada gaari karaan, ayaa ah su'aal weli taagan.